Dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ka hadashay dadkii lagu laayay deegaanka Oromada | SAHAN ONLINE
Dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ka hadashay dadkii lagu laayay deegaanka Oromada
JIGJIGA – Maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ka hadlay dadkii maalmo ka hor lagu laayay deegaanka Oromada Itoobiya,kaddib markii loogu galay xero ay gabaad ka dhigteen taasoo ay lahaayeen Booliska.
Dadka Soomaalida ah ee la laayay ayaa kuwa ku noolaa deegaanka Oromada ayaa ka badan lixdameeyo qof oo lasoo saaray,halka kuwa kalena la baadi-goobayo,si tirada rasmiga ah la isugu uruuriyo.
Madaxweyne Kuxigeenka Dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdixim Cigaal Cumar ayaa sheegay in la isku qaldayo dadka la laayay iyo isku dhacii xuduuda,wuxuu xusay in dadka hadda la laayay ay ahaayeen dad degenaa Bartamaha deegaanka Oromada balse aysan wax shaqo ah ku lahayn waxyaabihii ka dhacay Xuduuda labada deegaan.
Wuxuu kaloo uu sheegay in dadkaas aysan weligood arkin deegaanka Soomaalida isla markaana aysan luuqada Soomaaliga xitaa aqoon balse dhiigooda uu Soomaali ahaa,muddo afar bilood ahna la cunaqabateeyay,markii xiisada bilaabatay.
Madaxweyne Kuxigeenka deegaanka ayaa sheegay in 64 qof oo mayd ah laga soo saaray xabaal wadareedyo lagu aasay isla markaana ay baadigoobayaan meydad kale si tirada rasmiga ah ay ka badan karto.
Ra’iisal Wasaaraha dalka Itoobiya Hailemariam Desalegn ayaa guddi u saaray xasuuqa sida uu sheegay Madaxweyne kuxigeenku isla markaana uu baaritaan socdo.
Maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa raadinaya xuquuqda dadkii la laayay iyo sidii cidii ka dambeysay sharcigana loo horkeeni lahaa.